> Resource> iTunes> Olee otú iji weghachi iPhone si iTunes
Isiokwu a Aims na-enye ndu na ngwọta ndị na-chọrọ iji iTunes iji weghachi ha iPhones ụlọ ọrụ ntọala, weghachi ha iPhones si iTunes ndabere, ma ọ bụ nanị chọrọ idozi N'ỤLỌ NCHE A: iTunes rapaara na-akwadebe iPhone maka weghachi. Na-agụ na iji na-enweta otu maka gị.
Part 1: Jiri iTunes iweghachi gị iPhone ka Factory Ntọala
Nkebi nke 2: iTunes Nọgidesiri na-akwadebe iPhone maka Weghachi?
Nkebi nke 3: Weghachi Your iPhone si iTunes ndabere
Mkpa ka ị ga-esi na-akwadebe ọrụ n'okpuru mere mbụ ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji iTunes iweghachi gị iPhone ụlọ ọrụ ntọala:
1. Download na wụnye ọhụrụ version nke iTunes na kọmputa gị.
2. Ndabere data na gị iPhone bụrụ na i nwere mkpa data na ya.
3. Gbanyụọ Chọta My iPhone, ma gbanyụọ WiFi iji gbochie akpaaka mmekọrịta iCloud.
Nzọụkwụ iweghachi gị iPhone ụlọ ọrụ ntọala
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPhone na kọmputa, na mgbe ahụ na-agba ọsọ iTunes.
Nzọụkwụ 2. Mgbe gị iPhone a ghọtara site iTunes, pịa na ngwaọrụ aha na ekpe menu.
Nzọụkwụ 3. Ugbu a, ị pụrụ ịhụ nhọrọ nke "Weghachi iPhone ..." na Summary window.
iTunes rapaara na-akwadebe iPhone maka weghachi? O yiri ka ọ bụ a nkịtị nke n'ihi na nza nke ndị mmadụ mgbe ha na imelite ha ngwaọrụ ọhụrụ iOS. Ọ na-agwa gị na gị iPhone bụ na mgbake mode na-ajụ gị weghachi ya ugbu a, ma mgbe ị na-akpali on, ọ dị nnọọ araparawo "akwadebe iPhone maka weghachi" ruo ọtụtụ awa. Olee otú anyị pụrụ idozi nke a? E nwere alway a ụzọ.
1 click dozie a "na-akwadebe iPhone maka weghachi" ihe
Ebe ọ bụ na iTunes enweghị ike inyere gị weghachi ngwaọrụ, i nwere ike iji onye ọzọ dị ka Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery). Ọ nwere ike na-esi na gị iPhone si mgbake mode ka iTunes ịchọpụta ya maka ihe ịga nke ọma weghachi. Mbụ, download free ikpe version n'okpuru.
Mechie iTunes na kọmputa gị, na mgbe ahụ na-agba ọsọ usoro ihe omume. Mgbe gị iPhone achọpụtara site usoro ihe omume, ị ga-ahụ na windo dị ka e gosiri na nri, na-ekwu na gị iPhone bụghị na nkịtị mode. Ugbu a, ị nwere ike nweta ya azụ nkịtị nanị site pịa na "Malitegharịa ekwentị ahụ na ngwaọrụ" button. Nke ahụ dị mma.
Iji weghachite iPhone si iTunes ndabere, e nwere ụzọ abụọ. The commonest ụzọ na-eji iTunes iji weghachi nkwado ndabere na mpaghara kpamkpam gị iPhone, ka ndị ọzọ na ụzọ bụ selectively weghachi ọ bụla ị chọrọ site na nkwado ndabere na mpaghara na-enweghị iTunes. Ka ego otú ime ya n'okpuru.
Weghachi iPhone si iTunes ndabere kpamkpam
Ọ bụrụ na ị na-adịghị ihe ọ bụla dị mkpa na gị na iPhone, otú a bụ oké nhọrọ. Ị nwere ike iweghachi ihe dum ndabere data gị iPhone kpamkpam.
Dị nnọọ jikọọ gị iPhone na kọmputa na mbụ. Mgbe ahụ na-agba ọsọ iTunes na pịa ngwaọrụ aha na ekpe menu. Ị pụrụ ịhụ Summary window-egosipụta na nri. Chọta "Weghachi ndabere ..." bọtịnụ na pịa ya. Mgbe ahọrọ ndabere faịlụ na ị chọrọ iji weghachi na-amalite na-eweghachiri.
Cheta na: Ị nwekwara ike nri pịa ngwaọrụ aha na n'aka ekpe na-ahọrọ "Weghachi ndabere ...". Ọ bụ otú ahụ ka ị na-eme dị ka nzọụkwụ n'elu.
Selectively weghachi iPhone si iTunes ndabere enweghị na-eji iTunes
Ọ bụrụ na ị na-achọghị ka ida data na gị iPhone mgbe ị chọrọ na-azụ data site na iTunes ndabere, otú a bụ ihe ị na-achọ. Na Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery), ị nwere ike ịhụchalụ na selectively naghachi ọ bụla ị chọrọ site na iTunes ndabere na-enweghị adịkwa ọ bụla ẹdude data na gị iPhone. Dị nnọọ download ikpe mbipute n'okpuru nwere a na-agbalị mbụ.
Nzọụkwụ 1. Họrọ "naputa site na iTunes ndabere File" na họrọ iTunes ndabere faịlụ na ị chọrọ iji weghachi. Wee pịa na "Malite iṅomi" button iji nweta ya amịpụtara.
Nzọụkwụ 2. Preview amịpụtara data na nne Mmetụta ihe ị chọrọ iji naghachi na otu Pịa.